Biyo Xireenka Turkwel oo qaarka uu saaran in uu fatahaad sameeyo. - Iftiin FM
by Iftiin FM Reporter October 17, 2020
Raila Odinga oo baaq xoogan uu diray Kenyanka .
Wasiirka dowlad wadaajinta ee dalka oo Cabasha Mujiyay Moshinada Xilka Looga qaadaya gavanarada dalka ee soo badanaya
Baararka khamriga ee ismaamulka Narok oo ilbaabada loo laabay.
DHAGEYSO:Barnamij gaar ah oo kusabsan Kenyanka farahooda ay galeen xogta UNHCR
Naby Keita oo seegi doono kulanka Liverpool Vs Everton.
Dr .William Ruto oo ka hadlay shaqa la’aanta haysata dhalinyarada dalka.
Dr Fred Matiangi oo ka hadlay ganacsiga Qaadka .